I-Semalt: I-Grepsr - I-Platform Yokwandisa ye-Chrome ephumelelayo
I-Grepsr iyinhlangano yesikhulumi esinqabile futhi esilula, lapho abasebenzisi bangabutha futhi bahlele khona idatha evela enetheni. Igxila kubasebenzisi abangewona ezobuchwepheshe abazimisele ukukhokhisa i-premium ukuze baqoqwe idatha yabo futhi bahlelwe ngendlela ehlelekile. Ithuluzi le-elebhu lewebhu linikeza izinzuzo ezilandelayo kubasebenzisi bayo:
Londoloza Isikhathi Namandla
Abasebenzisi bangakhipha idatha emakhasini ahlukahlukene ewebhu ngaphandle kokusebenzisa okunzima amathuluzi esofthiwe. Kumele nje bahlele ikhalenda yabo ngezikhathi zonke zokwenza umsebenzi. Kuyinto uhlelo lokusebenza olulula lokulahla isofthiwe nge-interface yomsebenzisi-friendly ezwakalayo kubasebenzisi bezobuchwepheshe. Namuhla amakhasimende amaningi asebenzisa le platform ukuze athole imiphumela emihle ezinkampanini zabo. I-Grepsr iqinisekisiwe ukuyihambisa idatha efanele uma kunesidingo.
Isebenzisa Amathuluzi Asebenzayo Nemisebenzi Ezenzakalelayo
I-Grepsr isebenzisa amathuluzi amanga ngempela, kanye nokusekela okukhulu nokuhlanganiswa. Ngenxa yalokho, inikeza ipulatifomu elula kubasebenzisi bayo, abafuna ukusebenzisa amathuluzi akhethekile ukuze bakhiphe cishe noma yini evela enetheni. Isibonelo, loluhlelo lwesofthiwe lusebenzelana nemininingwane ye-B2B, njengamanani wemikhiqizo, uhlu lwamasheya, amagama, kanye noxhumana nabo bebhizinisi.
Nikeza Abasebenzisi Ithimba Lokusekela Elimangalisayo
Akuyona njalo umsebenzi olula wabasesho bewebhu ukususa yonke idatha abayidingayo. Isibonelo, uma bezama ukuqoqa amanani ezitokisini ezithile kusuka kumakhasi ewebhu kanye newebhusayithi ishintsha isakhiwo sayo, ukusethwa kwabo kwesikhumba kudinga ukuphindaphinda. Lo msebenzi ongenziwa yizazi zeGrespr ezingenayo imali eyengeziwe.
Ubani osebenzisa lolu hlelo lwe-Scraping Software Program
Kukhona izinkampani eziningana ezimakethe ezidinga ukuthola nokuhlela idatha yabo yewebhu, njengezinhlaka ezinkulu nabathengisi. Bobabili badinga idatha yokuncintisana njalo futhi ochwepheshe be-Grepsr bangabasiza. Ngaphezu kwalokho, amafemu amancane angadinga futhi lolo sizo ukukopisha nokunamathisela idatha kusuka kuwebhu ngokuzenzekelayo.
Yakha Imiklamo nge-Grepsr
Uma abasebenzisi bedala iphrojekthi ethile, le platform yesikhulumi ihlaziya futhi ibuyisela kubasebenzisi isaphulelo esikhethekile (intengo). Uma intengo isethiwe, idokhumenti yedatha idalwe, futhi inqubo yokuqoqa idatha iqala. Abaseshi bewebhu baziswa ngabachwepheshe be-Grepsr ngezaziso zohlelo lokusebenza noma ama-imeyili.
Le platform yesikhulumi sesofthiwe isebenzisa ukubethela kwebanga, ngakho abasebenzisi bangaqiniseka ukuthi yonke imininingwane yabo iphephile. Ngaphezu kwalokho, kudingeka bazi ukuthi noma nini abafuna, bangaba nokulawula okugcwele kwedatha yabo Source .